Our Volunteers - Khan Academy Burmese Translation Project
Guide for our new volunteers
How to Watch KA Videos
Subtitling Khan Academy Videos
Voice Dub Volunteer
Aung Pye Phyo
Hnin Ei Phyu (Iris)
May Phyn Cin
Nyi Nyi Mg
Shwe Yee Mon (Stella)
Su Eindaray Linn
Yu Thu Zin Htet
Co-Founder of Khan Academy Burmese
S.F, Bay Area,
S.F Bay Area,
S.F Bay Area, USA
Ko Ko Ye`
S.F Bay Area, California, USA
May Phyu Cin
Daw Kyi Kyi
Hlwan Htet Kyaw
Su Eindaray Lin
Hnin Ei Wai
May Thaw Thar
Moe Moe Han
Pyae Phone Thaw
" ကျောင်းနဲ့လဲဘာမှမဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဘာကြောင့်အိမ်စာအနေနဲ့တင်ရတာလဲလို့ ၊ အဲဒါနဲ့ဆရာ့ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဘဲမေးလိုက်တယ် “ ဆရာ ဒီအိမ်စာလုပ်ရင် အမှတ်ရမှာလား ၊ ဒါက ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာမှ မပါတာ ” ဆိုတော့ ဆရာက “ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲမပါပေမယ့် အမှတ်ပေးပါတယ် ၊ အကြောင်းကတော့ ဖတ်စာအုပ် က သူ့လိုမသင်နိုင်ဘူးလေကွယ် ” တဲ့ဗျာ ၊ "
" အခြေခံမလို ရိုးရှင်းတဲ့ ပြကွက်ဖြေရှင်းနည်းများ နဲ့ " အခမဲ့ ကမ္ဘာ့တန်းမီပညာရေး " ပို့ချပေးနေတဲ့ အရင်းအမြစ် တစ်ခုရှိနေပါတယ် ၊ သချာင်္ကို ပုံသေနည်းကျက်စရာမလိုပါ ၊ နားလည်အောင်သာကြည့်လိုက်ပါ ၊ အလားတူ ရူပဗေဒ ၊ ဓာတုဗေဒ ၊ ဇီဝဗေဒ ၊ ဆိုရှယ်သမိုင်း ၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ တို့လို ခေတ်မီတက္ကသိုလ် ပညာရပ်တွေကို မြန်မာစာဖတ်တတ်ရုံနဲ့ သင်ယူနိုင်ပါပြီ ၊ လူတိုင်းကိုစာမသင်ပေးနိုင်ပေမယ့် သူတို့ကိုစာသင်ပေးတဲ့ ဗွီဒီယိုပေးကြည့်နိုင်ပါတယ် ၊ မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို ကျောင်းပညာသင်ပေးသလို မြန်မာအနာဂါတ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေကို သိပ်ကောင်းတဲ့ ပညာရေး အခွင့်အရေး တစ်ခု လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါလားခင်များ ၊ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းလေး နဲ့ ပါဝင် ဘာသာပြန်ပေးလို့ရပါတယ် ၊ ပညာ က ကျောင်းပညာ ပါ ၊ အတန်းပညာမဟုတ်ပါ ၊ အဆင့် က ကမ္ဘာ့အဆင့်ပါ ၊ အင်္ဂလိပ်လို သင်တဲ့ သင်္ခန်းစာဖြစ်နေတော့ မြန်မာလို လွယ်သွားအောင် ဘာသာပြန်ပေးဖို့ လုပ်အားပေးလိုနေပါတယ် ၊ အုတ်တစ်ချပ် နိုင်မှ ကူညီလို့ရတာမဟုတ်ပါ ၊
သဲ တစ်ပွင့် ရှိမှ အင်္ဂဒေ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ကိုယ်သိတဲ့ မြန်မာဇော်ဂျီလက်ကွက်ကနေ ကျေးလက်မြန်မာလူထုအလွှာကို မြန်မာ့ပညာရေး က မပေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်းမီအခမဲ့ပညာရေး ကို သင်ယူနိုင်စေဖို့ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ဝိုင်းဝန်းကူညီဘာသာပြန်ပေးကြရအောင်လား ၊ မြန်မာဘာသာပြန်ကူညီလိုသူများ ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားစရာမလိုပါ ၊ ဒီမိုကရေစီပြည်သူ့ပညာရေးအတွက် ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးတဲ့ အချိန် နာရီဝက်လျှော့ပေးရင်ရပါပြီ သူငယ်ချင်းတို့ ။ " ကိုညီညီ - တောင်ကြီး
"I believe this isagreat way to help students in Burma / Myanmar, especially for those who cannot afford high cost tuition."
"I can contribute my spare time by translating educational videos to Burmese, which will help Myanmar people who have difficulties in understanding the course subject and improve their education."
"It's foragood cause, and I support better education in Myanmar / Burma."
"I remember my teachers from TTC. I won't be who I am without them. And I like Khan Academy and Sal's teaching style. This is my way of giving back to my teachers to taught me great deals."
The Official KHAN ACADEMY® website is located at: www.khanacademy.org and all Khan Academy content is available for free.